The Oppo Ace 2 bụ ugbu a ukara: atụmatụ, ahịa na ihe niile banyere nke a mobile | Gam akporosis
A kwadoro Oppo Ace 2 na ihuenyo 90 Hz, Snapdragon 865, 65 W ngwa ngwa ngwa ngwa na ndị ọzọ
Ekwentị ọhụụ dị elu dị elu abịarute, ọ bụ ya Oppo Ace 2, ọnụ nke na-eweta 5G njikọta maka Chipset Snapdragon 865 na-etinye n'ọrụ n'okpuru mkpuchi ya ma mee ya onye asọmpi tozuru oke na mpaghara dị elu nke ahịa dịka otu n'ime mobiles kachasị ike taa enweghị ihe ọ bụla ga-emere ndị ọzọ anyaụfụ.
Ngwaọrụ a dị ka flagship ọhụrụ nke ndị na-emepụta ChinaỌfọn, ọ na-abịa na nke kasị mma nke kasị mma. Na ihe na - eme ka ọ pụta ìhè ọbụna karị bụ uru ya bara uru maka ego, ihe na - egosi ụdị Oppo mgbe niile.
1 Atụmatụ Oppo Ace 2 na nkọwapụta teknụzụ
1.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
2 Ọnụahịa na nnweta na ahịa
Atụmatụ Oppo Ace 2 na nkọwapụta teknụzụ
Ihe mbu nke puru iche na ama ama a bu nke ya 6.5 anụ ọhịa ahụ, nke bụ teknụzụ OLED ma rụpụta mkpebi FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ. Nchịkọta ahụ na-egosi oke nha ihu-nha nke 91.8%, yana ọ na-abịa na 100th ọgbọ Corning Gorilla Glass ma na-ewepụta 3% DCI-P1,100 agba gamut, nhụjuanya XNUMX nits na a Ogologo 90Hz na-enye ume ọhụrụ maka ọkwa dị elu na nzaghachi 180Hz. Ihe ngosi ahụ bụkwa HDR10 + gbaara agbazi na enweghị atụ na-abịa na onye na-agụ akara mkpisiaka wuru n'ime onwe ya iji tụfuo iji azụ ma ọ bụ akụkụ otu kpamkpam.
Dị ka anyị kwuru na mbido, Ikpo ekwentị nke ekwentị ọhụrụ a na - etu ọnụ bụ Snapdragon 865Octa-core chipset nke Qualcomm kachasị ike bụ 7nm ma gosipụta isi ihe ndị a: 1x Cortex-A77 na 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz. N'ezie, Ekele maka usoro nhazi a na X55 modem nke ọ na-eburu, ngwaọrụ ahụ dakọtara na netwọ SA na NSA 5G.
Nhazi nke LPDDR5 RAM na oghere UFS 3.0 n'ime ya dakọtara na nhazi ahụ bụ 8/12 GB na 128/256 GB, n'otu n'otu. N'otu oge ahụ, Batrị mAh 4,000 dị maka iji nweta ekwentị ọ na-ekwe nkwa nnwere onwe nke otu ụbọchị na iji ojiji. Ejiri batrị ihe na-erughị otu awa ekele maka Company'slọ ọrụ ahụ 65W ultra-ngwa-ngwa Nchaji technology. Enwekwara teknụzụ ikuku ikuku 40W Super AirVOOC, nke bụ ugbu a kachasị ọsọ n'ụwa na mpaghara mkpanaka ma na-enyekwa oge elekere ọzọ iji naanị nkeji 5 nke ikuku ikuku, yana asambodo TUV Rheinland. Na mgbakwunye na nke a, Oppo Ace 2 nwere ụgwọ ntụgharị nke 10 W.
Banyere ngalaba foto, anyị nwere okirikiri quad modul nke 586 MP Sony IMX48 a maara nke ọma na-eduzi. Ejiri onye na-agba ụta a na igwefoto igwefoto dị na MPN nke 8 MP nwere nlele anya nke 119 Celsius, oghere eserese eserese 2 MP na igwefoto oji na nke ọcha nke 2 MP. N'aka nke ya, maka foto dị n'ihu, mmata ihu, oku vidiyo na ihe ndị ọzọ, ihe mmetụta 16 MP nwere oghere f / 2.4 na-ekwu "ugbu a" na obere ntụpọ ihuenyo nke dị n'akụkụ aka ekpe elu.
Oppo Ace 2 igwefoto quad
Banyere ngwanrọ, Ekwentị mkpanaka ọhụrụ a na-eji Android 10 ahaziri nkewa akwa Laos 7 Agba nke emepụtara, nke dị na sịnịma ọhụrụ gị niile dịka ụdị kacha dị ugbu a.
Na Oppo Ace 2 nwekwara a friji usoro Ọ na-arụ ọrụ na akpaghị aka mgbe ọ dị mkpa. Ọnọdụ nke ọ na-apụta na ọrụ nke protagonist bụ mgbe egwuregwu arụmọrụ dị elu ma ọ bụ ihe eserese na-achọsi ike na-agba na ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ. Onye nrụpụta ahụ kpughere na o jisiri ike belata ike oriri site na ihe ruru 12% na ụfọdụ egwuregwu yana ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịda na 1.4 Celsius na-enweghị ịchụ ọrụ ya.
IKIRU 6.5-inch OLED nwere pikselụ 2.400 x 1.080 FHD + mkpebi / 90 Hz na nzaghachi mmetụ 180 Hz / Corning Gorilla Glass 5 / HDR10 + / 1.100 nits kacha nchapụta
Ram 8 ma ọ bụ 12 GB LPDDR5
Ndị isi Azụ: 586 MP Sony IMX48 (f / 1.7) 8 MP na OIS + 119 MP na 2º obosara + 2 MP maka blur mmetụta + XNUMX MP B & W mmetụta / Ihu: 16 MP (f / 2.4)
UMUAKA 4.000 mAh na 65W ngwa ngwa ngwa / 40W ikuku na-akwụ ụgwọ / 10W nkwụghachi ụgwọ
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihuenyo mkpịsị aka agụ / ihu ude / USB-C / Jụrụ usoro
Ọnụahịa na nnweta na ahịa
Maka ugbu a Oppo Ace 2 dị maka ire ere na China, mba ebe egosiri ya. Amabeghị mgbe a ga-etinye ya na mpaghara ndị ọzọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara ọnụahịa mba ụwa. N'oge a, anyị nwere naanị usoro atọ dị iche iche ma kwupụta ahịa:
Oppo Ace 2 8 + 128GB: 3.999 yuan (ihe dị ka euro 520 ma ọ bụ 567 dollar na ọnụego mgbanwe)
Oppo Ace 2 8 + 256GB: 4.399 yuan (ihe dị ka euro 572 ma ọ bụ 624 dollar na ọnụego mgbanwe)
Oppo Ace2 12 + 256GB: 4.599 yuan (ihe dị ka euro 598 ma ọ bụ 652 dollar na ọnụego mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A kwadoro Oppo Ace 2 na ihuenyo 90 Hz, Snapdragon 865, 65 W ngwa ngwa ngwa ngwa na ndị ọzọ
Kedu ihe anyị ga - atụ anya n'aka Galaxy Tab S6 Lite?